Soo dejisan Google Drive 2.3.283.31.33 – Android – Vessoft
Google Drive – software ah in ay la shaqeeyaan daruur ka adeega Google kaydinta. Software The kuu ogolaanayaa inaad si loo badbaadiyo files oo daruur ku kaydinta, files raadinta, ku dar images, aragtida PDF files, la shaqeeyaan waraaqaha of qaabab Microsoft Office iwm Google Drive u saamaxaaya in ay ku badasho qalabka la users iyo saaxiibo kale oo ka mid ah liiska taleefanka xidhiidh ah. Software soo bandhigayaa isbedel ah in dukumentiyada shaqayntu ka mode of waqtiga dhabta ah. Google Drive sidoo kale siisaa inay helaan si ay fayl iyo dokumentiyada aan xiriir si aad internet.
Shaqeeyaa files of noocyada kala duwan
Baaritanada galalka iyo waraaqaha
Awoodda in ay is dhaafsadaan waxyaabaha la users kale
Edit wadajirka ah ee files in qaabka waqtiga dhabta ah
Helitaanka files aan xiriir la lahaayeen internet